ဝါးခယ်မ : August 2014
ဓမ္မစေတီ ခေါင်လောင်းဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းနှင်. သတင်းများစုစည်းမှု ( ၇ )
ဒီနေရာမှာတော. အင်တာနက်ဈေးကြီးတယ်လို. နာမည်ကြီးတဲ့ ဖုန်း Company တစ်ခုရဲ.စကားပဲ ငှားသုံးရမယ်ထင်ပါတယ် ။ မြန်မာပြည်မှာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေ ဖြစ်ပေါ်နေပြီ လို.
သတ်မှတ်ထားတဲ့နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်တဲ့ ၂၆ ရက် ၈လ ၂၀၁၄ နေ.မှာပဲ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းတွေ.ပြီဆိုတဲ့ သတင်းကိုတူးဖော်ရေးအဖွဲ.က ထုတ်ပြန် လာခဲ့ပါတယ် ။ ခေါင်းလောင်းကြီးကို သူတို့ တွေ့ရှိထားပြီဖြစ်ပေမယ့် သတင်းထုတ်ပြန်ရတာ နောက်ကျရတာကတော့ နဂါးတွေက ခေါင်းလောင်းကြီးကို ပူဇော်နေလို့ ဖြစ်တယ်လို့ အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နေတဲ့ ဦးစံလင်းရဲ့ ကြေညာ ချက်မှာ တွေ့ရပါတယ်။
“နဂါးများမှာ အကြီးဆုံးရွှေရောင် နဂါးမင်းကြီးနှင့်တကွ နဂါး အပေါင်းတို့က ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းတော် ကြီး ကို အကြီးကျယ်ဆုံး ခမ်းခမ်းနားနား ဆီမီးပူဇော်နေသည့်အတွက်ကြောင့် သတ်မှတ်ရက်နေ့ကို သတင်းထုတ်ပြန်ရန် နောက်ကျနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်” လို့ ဦးစံလင်း ( မောင်စံလင်း - မြေပုံ- ကော့သောင်း) ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ရေးထားပါတယ်။
ခေါင်းလောင်း တွေ့ရှိ ကြောင်း အရိယာဝိဇ္ဇာအပေါင်း ကို ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံပြီးမှ အတိ အလင်းကြေညာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးစံလင်းက ခေါင်းလောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ရေး အဖွဲ့သို့ ဖုန်းဆက်ကာ ပြောကြားပြီး အဲ့ဒီပြောကြားချက်ကို ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်တယ်လို. သိရပါတယ် ။
ဒီဗွီဘီသတင်းတပုဒ်မှာတော့ ဦးစံလင်းက ခေါင်းလောင်းကြီးကိုတွေ့တာ အတည်ပြု ပြောထားပေမယ့် ဓမ္မစေတီခေါင်း လောင်း ဟုတ်၊ မဟုတ် ကိုတော့ ကုန်းပေါ်ရောက်မှ သိရမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ဒါ.အပြင် Online မှာ ၊ ပြင်ပလောကမှာ ပျံ.နှံနေတဲ့ သတင်းတွေကတော. အစုံပါပဲ ။ တူမောရိုးဂျာနယ်က ရေးထားတဲ့ ကျပ်သိန်း ၅ဝဝ အလှူရှင် အမျိုးသမီးကို နဂါး ဝင်ပူးပြီး သတင်းမထုတ်ပြန်ဖို့ ပြောတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်လည်း ပါဝင်ခဲ့ပြီး ယခင်တစ်ခေါက် ၀င်ပူးတုန်းကတော. အမြီးကို သောင်တူးစက်ဖိမိထားလို့ ဆိုခဲ့ပါသေးတယ် ။
ဒီထုတ်ပြန်မှု နဲ.ပတ်သက်လို. မွန်သမိုင်း သုတေသနအသင်း တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး နိုင်ရဲဇော်က ပြောတာကတော. ‘‘တွေ့တယ်ဆို ဘယ်လို တွေ့လဲ၊ ပြနိုင်လား။ ပြည်သူလူထုကို လှည့်စားရင်တော့ မကောင်းဘူး။ ပြည်သူတွေ အညာမခံရဖို့ လိုတယ်။ အစိုးရမှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်’ လို.ပြောခဲ့သလို ‘‘ခေါင်းလောင်းအသေးတစ် လုံးတွေ့ရင်တော့ ဇာတ်ကွက်ပဲ၊ သမိုင်းစာအုပ်တွေထဲမှာ ခေါင်း လောင်းအသေးတစ်လုံးမြုပ်တယ် ဆိုတာ မရှိဘူး။ ပုရပိုက်သေတ္တာ တွေ့တယ်ဆိုရင်လည်း လှည့်စား မှုသက်သက်ပဲ’ လို.ထပ်မံပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။
ဒါ.အပြင် Online ပေါ်က အရေးအသားအချို.မှာတော. ဒါတွေဟာနိုင်ငံရေးလှည်.စားမှု တစ်ခု ၊ လူတွေရဲ. အာရုံကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းမှုလို. ရေးသားချက်အချို.တွေ.ရပေမယ်. ဘာတွေကို အာရုံလွှဲတယ် ၊ ဘာကြောင်.အာရုံလွှဲတယ် ၊ အဲ့ဒီလိုလွှဲလိုက်လို. ဘာတွေထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်သွားတယ် ၊ ဘယ်သူတွေအထိဆွဲဆောင်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ယုတ္တိ ယုတ္တာကျကျ အရေးအသားမျိုး ဝေဖန် ထောက်ပြမှုမျိုးတော. မတွေ.ရပါဘူး ။
တိုင်းရင်းသားတို.ဆုတောင်းပွဲ နဲ. လက်ရှိမြင်ကွင်း
ပထမတုန်းက မွန်ဆရာတော်တွေနဲ. မွန်တိုင်းရင်းသားတွေ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မှာ ဆုတောင်းရွတ်ဖတ်ခဲ့ကြသလိုပဲ သြဂုတ် ၂၄ ရက်နေ.ကတော. မနက်၇ နာရီ ကနေ၉ နာရီခွဲထိ ကမ်းစပ် မှာစင်ထိုး ပွဲပေးပြီး မွန်ဘာသာဖြင့် ထပ်မံဆုတောင်းခဲ့ကြပါသေးတယ် ။
ရာမညပုညကာရီ မွန်ဝတ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်အသင်းကကြီးမှူးပြီး ဗုဒ္ဓမြတ်ဘုရားရှင်များနှင့် မွန်ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းတော်ကြီးတို့ကို ဆွမ်း၊ သစ်သီး၊ ပန်း၊ ရေချမ်း၊ဆီမီးတို့နဲ. ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပူဇော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။
‘‘ကမ်းစပ်မှာစင်ထိုးပြီး ကန်တော့ပွဲပေးတယ်။ ဆွမ်းကပ်တယ်။ မွန်လိုရွတ်ဖတ်ကြတယ်။ ပစ္စည်းပွဲတွေက အများကြီးပဲ။ ဘုရားပန်းအစုံ၊ သစ်သီးပွဲတွေရော’’လို .အဲ့ဒီနေရာမှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ ဒေါပုံမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ဦးဝင်းလွင်ဦးက7Day ကိုပြောတယ်လို.လည်းဆိုပါတယ် ။
ရန်ကုန်မြို့မှာရှိ တဲ့မွန်တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေ စုပေါင်းပြီး ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီး ဆယ်ယူရေးအတွက် အထောက်အကူပြု ရန် လာရောက်အဓိဋ္ဌာန်ပြု ဆုတောင်းပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ် ရာမညပုညကာရီ မွန်ဝတ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်အသင်းကပြောပါတယ် ။
ဆယ်ယူရေးအဖွဲ့ထံကရတဲ့ သတင်းအရကတော. ရေငုပ်သမား ဦးစံလင်းဟာ ကော့သောင်းမှာရှိ တဲ့နေအိမ်ကိုရောင်းပြီး ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းဆယ်ယူရန် စတင်ကြိုးပမ်းခြင်းဖြစ်ကာ ဦးဝင်းမြင့်က ဆက်လက် မ တည်၍ ယခုလို ဆယ်ယူခြင်းဖြစ်ကြောင်း အခြားစေတနာရှင်များ၏ လှူဒါန်းငွေများကိုလည်း ဘဏ်တွင် ထည့်သွင်းထားပြီး ယနေ့ထိ ထုတ်ယူသုံးစွဲရန်မလိုသေးကြောင်းလည်း သိရပါတယ် ။
လတ်တလောမှာတော. ခေါင်းလောင်း ရှာဖွေရေး အဖွဲ့ နေထိုင်တဲ့ သုံးထပ် သင်္ဘောနဲ. လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေ သော သောင်တူးသင်္ဘောတို့ ပိုမို နီးကပ်လာသည်ကို တွေ့ရပြီး သင်္ဘောနှစ်စီး နီးကပ်သွားခြင်းမှာ ခေါင်းလောင်းရှာတွေ့သော ကြောင့်ဟု လာရောက်ကြည့်သူများက ထင်မြင်နေကြပါတယ် ။
သြဂုတ် ၂၆ ရက်က ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း ရှာဖွေနေတဲ့ သောင်တူးစက်အနားကို စက်သမ္ဗန်များဖြင့် သွားရောက်ကြည့်ရှုသူများကို အနီးကပ်ခွင့်မပေးဘဲ ရေကြောင်းရဲများက တားမြစ်ထားကြောင်း သိရပါတယ်
ဦးစံလင်းနှင်. အထောက်အကူပြုကော်မတီ ပြောကြားချက်များ
ဦးစံလင်းက တွေ.ရှိမှု နဲ.ပတ်သက်ပြီး သြဂုတ် ၂၆ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခန့်က ပြောကြားရာမှာ “ခေါင်းလောင်းကြီးတွေ့ပြီလို့ ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းလောင်းဆယ်ယူရေး အဖွဲ့ကနေ ကြေညာချက် ဒီနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီ။ အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက် စာရွက်တွေကိုလည်း လိုက်ဝေနေပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ကျန်တဲ့တူးဖော်မှု လုပ်ငန်းတွေကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေရတဲ့အတွက် ဆယ်ယူမယ့်အပိုင်းကိုတော့ အသေးစိတ် မဆွေးနွေးရသေးပါဘူး” လို.ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။
ခေါင်းလောင်းရှာဖွေရေး အထောက်အကူပြု ဆပ်ကော်မတီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးနိုင်မင်းအောင်က တော. “ခေါင်းလောင်းကြီးကို တွေ့ပြီလို့ ဦးစံလင်းတို့က အတည်ပြုလိုက်ပါပြီ။ ခေါင်းလောင်းကြီးကို ကုန်းပေါ်ကိုဆယ်ယူဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ကိရိယာတွေ ကြိုးတွေကို ပြင်ဆင်နေပြီလို့ ကျွန်တော်တို့သိရတယ်” လိ.ု ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။
သြဂုတ် ၂၆ ရက်မှာ သောင်တူးလုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်ပြီး ကြည့်ရှုသည့်လူများဖြင့် သာကေတဘိုးလင်းဆိပ်ကမ်းတွင် စည်ကားလျက်ရှိနေကာ လာရောက်ကြည့်ရှုသူများကို စတုဒိသာမုန့်ဟင်းခါးများ ကျွေးမွေးလှူဒါန်းနေတယ်လို.သိရပါတယ် ။
သူတို.လည်း မှတ်တမ်းတင်တာပေါ. ဒါပေမယ်.
ဒီလိုအခြေအနေထဲမှာခေါင်းလောင်းနဲ.မသက်ဆိုင်ပေမယ်. သတင်းတစ်ခုကလည်း ဆက်နွယ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါသေးတယ် ။ အဲ့ဒါကတော. ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းဆယ်ယူနေတာကို သွားကြည့်သူတစ်ဦးကအဲ့ဒီနေရာအနားမှာ ဘွိုင်ချည်နှောင်ထားတဲ့ တပ်မတော်(ရေ)မှ စစ်ရေယာဉ်တစ်စီး ဆီထုတ်ရောင်းနေသည်ဆိုပြီး အထက်ဖော်ပြပါဓါတ်ပုံနဲ.တနင်္လာနေ့ (၂၅-၈-၂၀၁၄) ညပိုင်းက Post တင်ခဲ့ပါတယ် ။
ဒါနဲ.ပတ်သက်လို. Myanmar Navy Page ကရှင်းလင်းရာမှာ ဖြစ်စဉ်အမှန်မှာ ယင်းစစ်ရေယာဉ်သည် စစ်ရေယာဉ်(၅၅၆)ဖြစ်ပြီး မနက်ဖြန်(၂၇-၈-၂၀၁၄) ရက်နေ့တွင် နှစ်ပါတ်လည် လွန်းတင်ပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်သဖြင့် ရေယာဉ်၏ Trim ညီစေရန်အတွက် လည်းကောင်း၊ လွန်းကျင်းပေါ်တွင် Welding အစရှိသည့် ရေယာဉ်ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက် လည်းကောင်း၊ မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမည့် Routine အရ လည်းကောင်း၊ ဆီ / ဆီချေး / ရေ နှင့် လောင်စာအမျိုးမျိုးကို ရေယာဉ်ဝမ်းဗိုက်အတွင်း Hull Cleaning လုပ်၍ သန့်ရှင်းဖယ်ရှားနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရသော လုပ်ငန်းစဉ်မျိုးကို ရေယာဉ်နှင့်နီးစပ်သူအားလုံးလည်း နားလည်သိရှိသည့်အတွက် မည့်သူကိုမဆို မေးမြန်းနိုင်ကြောင်း ဆိုပြီးရေးသားခဲ့ပါတယ် ။
Ref Data & Photos ; Eleven Media Group ,7 Day Daily , Irrawaddy & Myanmar Navy ( NOP )
* ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်း နှင်. သတင်းများ စုစည်းမှု ( ၁ )
* ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်း နှင်. သတင်းများ စုစည်းမှု ( ၂ )
* ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်း နှင်. သတင်းများ စုစည်းမှု ( ၃ )
* ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်း နှင်. သတင်းများ စုစည်းမှု ( ၄ )
* ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းဆိုင်ရာ မှတ်တမ်း နှင်. သတင်းများ စုစည်းမှု ( ၅ )
* ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်း နှင်. သတင်းများ စုစည်းမှု ( ၆ )
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 1:16 PM No comments:
Labels: စိတ်ဝင်စားဖွယ် သတင်းများ, သမိုင်းဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ များ
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်း နှင်. သတင်းများ စုစည်းမှု ( ၆ )
ခေါင်းလောင်းတော် တူးဖော်မည်.အကြောင်း မြေပုံ မောင်စံလင်း (ကော့သောင်း) နှင်.အဖွဲ. ဇူလိုင် ၂၅ ရက်နေ.က ရန်ကုန်မြို. အောကစ်ဟိုတယ် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ
ခေါင်းလောင်းတော်ကြီးအား ပထမဆုံး ရေငုပ်စမ်းသပ်ဖူးသူ
ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းတော်ကြီးအား ၁၉၈၈ ခုနှစ် မတိုင်မီ ပထမဆုံး ပုဂ္ဂလိက သီးသန့်တူးဖော်ခြင်း အဖြစ် ရှာဖွေခဲ့သော ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန၊ သမိုင်း သုတေသနဌာနနှင့် အမျိုးသား စာကြည့်တိုက် ဦးစီးဌာန မြန်မာ့သမိုင်း အဖွဲ့မှ ပါမောက္ခ(ငြိမ်း) ဦးကျော်က ''ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က ၁၂ ဦး အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ရွှေတိဂုံ စေတီတော်မှာ ခေါင်းလောင်းကြီး ရှိခဲ့တာလည်း မှန်ကန်ကြောင်း၊ မြစ်ဆုံမှာ နစ်မြုပ်ခဲ့ပြီး ဆယ်ယူမည့်သူ မရှိခဲ့တာလည်း မှန်ကန်တဲ့အတွက် ၁၉၅၂-၅၃ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲထံ တူးဖော်ရှာဖွေခွင့် စာတင်ပြီး ပထမဆုံး ဆယ်ယူရေး လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်'' ဟု ပြောကြားသည်။
''အဲဒီဆယ်ယူရေးမှာ သုံးပတ်ကြာပြီး ရေအောက်မှာ သင်္ဘောပျက်လို တွေ့ခဲ့ရတယ်။ တစ်ရက်မှာတော့ သင်္ဘောပျက် တွေ့ခဲ့ပြီး ဘေးမှာ ဂျင်ပုံလို့ ထင်ရတဲ့ မြေဝါကျောက် စရစ်တွေ ဖုံးအုပ်နေတဲ့ အရာတစ်ခုကို နင်းမိ စမ်းမိကြောင်း ရေနောက်ကျိနေတဲ့ အတွက် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့ မတွေ့ရပါဟု ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ရဲ့ ရေငုပ်သမား တစ်ဦး ပြောလာတဲ့ အတွက် သေချာသိရအောင် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဆင်းပြီး ငုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ရေအောက်မှာ ရေစီးသန်ပြီး ရေတွေက နောက်ကျိနေတော့ ကိုင်စရာမရှိတဲ့ အတွက် ထိုဂျင်ပုံသဏ္ဌာန် အဝိုင်းကို ကိုင်တွယ်စဉ် ချော်သွားပါက သူ့ရဲ့နံဘေးမှာရှိတဲ့ သင်္ဘောပျက်အတွင်း ကျသွားရင် ပြန်ထွက်ဖို့ မလွယ်ဘူး၊ အောက်ခြေအထိ ငုပ်ရန်လည်း မလွယ်ကူတာကြောင့် ပြန်တက်ခဲ့ပါတယ်'' ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ ရေငုပ်သမား၏ ထပ်မံပြောကြား ချက်အရ ရေငုပ်ခဲ့စဉ် ထွေထွေထူးထူးတွေ့ ကြုံခဲ့မှုမရှိဘဲ ခေါင်းလောင်းလို့ ယူဆရသော ဂျင်ပုံသဏ္ဌာန် အလုံးကြီးနှင့် စီဘီပျက် (သင်္ဘောပျက်) ရှိနေတာကတော့ အခိုင်အမာ ဖြစ်ကြောင်း ရွှေဆင်းတု ရုပ်ပွားတော်တွေနဲ့ ရတနာပစ္စည်းတွေ၊ အခြားခေါင်းလောင်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အထောက်အထားတွေကိုတော့ မတွေ့ခဲ့ရကြောင်း ဦးကျော်၏ ပြောကြားချက် များအရ သိရသည်။
နာဂစ်အပြီး ရှာဖွေမှု နှင်. အခြေအနေ
နာဂစ်မုန်တိုင်း အပြီးတွင် ရန်ကုန်မြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် သင်္ဘောပျက်များ ရှာဖွေဆယ်ယူရေး၌ အမေရိကန် ခေတ်မီ သင်္ဘောများဖြင့် ဆယ်ယူခဲ့မှုများတွင် အဆိုပါ ခေါင်းလောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့် အချက်အလက် တစ်စုံတစ်ရာမှ မတွေ့ရကြောင်း သိရသည်။ ရေငုပ်သမား ဦးကျော်တို့အဖွဲ့ ဆယ်ယူပြီးနောက် ထပ်မံ၍ အဖွဲ့(၁၂)ဖွဲ့ ဆယ်ယူခဲ့ပြီး ပြည်ပမှ အဖွဲ့(၃)ဖွဲ့ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။ အစိုးရသစ် လက်ထက် ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် ကျိုက်ထီးဆောင်း ဆရာတော်ကြီးမှ ရှာဖွေခဲ့ပြီး ယခုအခါ ဦးစံလင်းမှ ထပ်မံရှာဖွေ ဆယ်ယူ ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းကြီး ရှိသည်ဟု ယူဆရသော မြစ်ဆုံနေရာတွင် အင်္ဂလိပ် လက်ထက်၌ ပုစွန်တုပ်ကွေး ခေါင်းပိုင်း ပေါ်နေပြီ ဟူ၍ ပြောဆိုခဲ့ဖူးကြောင်း၊ အင်္ဂလိပ်နှင့် ရုရှားမှ သိပ္ပံနည်းကျ အထောက်အကူ ပစ္စည်းများဖြင့် ရှာဖွေ ထောက်လှမ်းခဲ့ရာတွင် သံထည်ပစ္စည်း ရှိကြောင်း သိရှိခဲ့ပြီး သင်္ဘောပျက်များ ရှိသည်ကိုလည်း လက်ခံကြောင်း၊ ပြည်ပ အကူအညီဖြင့် ခေါ်ယူကာ တူးဖော် မည်ဆိုလျှင် ငွေကြေးကုန်ကျမှု များပြားနိုင်ပြီး စင်ကာပူ ကုမ္ပဏီမှ အကုန်အကျခံ၍ တူးဖော် ရေး ကိစ္စအား ညှိနှိုင်းခဲ့ရာ တောင်းဆိုချက်များ များပြားသည့်အတွက် မလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ သမိုင်း သုတေသန၏ အစီအစဉ်ဖြင့်သာ ရှာဖွေလေ့လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန သမိုင်းသုတေသန နှင့် အမျိုးသား စာကြည့်တိုက် ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးထံက သိရသည်။
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီးကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြု ချက်ဖြင့် ဦးစံလင်းနှင့် ဦးဝင်းမြင့် ဦးဆောင် သော အဖွဲ့ဝင်များက ဆယ်ယူရေးလုပ်ငန်း များကို သြဂုတ် ၇ ရက်တွင် စတင်ခဲ့ပြီးအ ဖွဲ့ဝင်အင်အား ၇ဝ၊ ဆလုံရေငုပ်သမား ၁ဝ ဦး အသုံးပြု၍ ရန်ကုန်မြစ်လယ်တွင် ရှာဖွေ ဆယ်ယူလျက်ရှိသည်။
''ရေငုပ်သမား ၁ဝ ဦးကို ကော့ သောင်းကနေ ခေါ်ထားတယ်။ ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းကြီးကို ဆယ်ယူပြီးရင် ရေတပ် စခန်းမှာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး ရွှေတိဂုံဘုရား ပေါ်မှာ ထားဖို့ရှိပါတယ်''ဟု ဦးစံလင်းက ပြောသည်။
လိုအပ်သောကူညီထောက်ပံ့မှုများ ကို အစိုးရဘက်မှ ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးပါ က မြန်မာ့နည်း၊ မြန်မာ့ဟန်၊ မြန်မာ့ အဆင့်မြင့်နည်းပညာများကို အသုံးပြု၍ ရက်အနည်းငယ်ဖြင့် ဆယ်ယူနိုင်မည်ဟု လည်း တိုင်းရင်းသားပညာရှင်ဦးစံလင်း က ယုံကြည်ထားသည်။
စောက် ၁၂ တောင်၊ အ၀ ၇တောင် ရှိပြီး အလယ်ဖောင်းရစ်တွင် နှစ်ကျိပ်ရှစ် ဆူဖောင်းကြွဘုရား ၂၈ ဆူနှင့်၎င်းအပေါ် ၌ အတွဲတစ်တွဲလျှင် ကျောက်သံပတ်္တမြား ၄၅ လုံးပါ အတွဲ ၄၅တွဲရှိ အတန်းနှစ် တန်း၊ စုစုပေါင်းကျောက်သံပတ္တမြား အလုံးပေါင်း ၄၀၅၀ လုံးပါရှိသော ဓမ်္မ စေတီခေါင်းလောင်းတော်ကြီးမှာမိုးကာလ ၌ ရေအနက် ၂၇ ပေ၊ မြေကြီးအောက် ၂၅ ပေ၊ စုစုပေါင်းရေမြေအနက် ၅၂ ပေ တွင် နစ်မြုပ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း ဦးစံလင်းက ပြီးခဲ့သောနှစ်များအတွင်း မီဒီယာသို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သေး သည်။
ထိုသို.တူးဖော်နေကြရာမှ မြစ်ဆုံအနီး ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောများကို အချက်ပြသောမီးပြ တိုင်အနီး ကိုက် ၂၀ ကျော်တွင် သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်နံနက်ပိုင်းက ရေအောက်တွင်ရှိသော အရာဝတ္ထုတစ်ခုနှင့် ချိတ်၍ထိုချိတ်ထားသော အမှတ်အသား အဖြစ် ရေပေါ်တွင်ဘောလုံး အမည်းနှစ်ခု ကိုက် ၃၀ အကွာ တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ ပြထားပြီး သံဃာတော်များ ပရိတ်ရွတ်ဖတ် သရဇ္ဈာယ်သည့် ဗညားလတ် သုံးထပ် သင်္ဘောဦးပိုင်းတွင် ငှက်ပျောပင်၊ ကြံပင်များ စိုက်ထူထား ကာယခင်ရပ်နားသည့် နေရာတွင်မဟုတ်ဘဲ ရေပေါ်အမှတ်အသားပြုလုပ်ထားသော ဘောလုံးအနက်နှစ်လုံး အနီးတွင် သင်္ဘောရပ်နားထားသည့် အတွက် ယခင်နေ့များနှင့်မတူသော အပြင်အဆင်ကို တွေ့မြင်ရ သောကြောင့် ထူးခြားမှုတစ်ခုရှိနေပြီဟု သုံးသပ်ဝေဖန်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ အမှတ်အသားပြုလုပ် ထားသော ဘောလုံးအနက်နှစ်လုံး အလယ်သို့ မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ ၄၈ မိနစ်တွင် ဗညားလတ်သင်္ဘောမှ ပရိတ်ရွတ်ဖတ်သော သမ္ဗန်စက်လှေ တစ်စင်း၊ ရေငုပ်အဖွဲ့ရေယာဉ် တစ်စင်းဖြင့် သာသနာ့အလံကို သမ္ဗန်တွင် စိုက်ထူကာ ထွက်ခွာလာခဲ့ပြီး ရေစစ်နေချိန်တွင် စတင်ရေငုပ်ကာ ဆရာတော်လေးပါးက သမ္ဗန်ခေါင် မိုးပေါ်မှမေတ္တာပို့ပရိတ်ရွတ်ဖတ် ၍ထိုနေရာကို လှည့်လည်လျက် ရှိသည်။ မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲတွင် ပင်လယ်ဝဘက်မှ မိုးမှောင်ကျလာပြီးလေတိုက်ခတ်လာကာ ရေပြင်တွင် လှိုင်းထန် လာခြင်းကြောင့် အနီးပတ် ဝန်းကျင်မှ ကြည့်ရှုနေသောစက်လှေများ ကမ်းသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာစဉ် ရန်ကုန်မြစ်ဝဘက်မှ ရွေ့လာသော မိုးရွာချလိုက်သည့်အ တွက် မြစ်ဆုံတွင် လှိုင်းထန်၊ လေတိုက်၊ မိုးရွာ လျက်ရှိသည်။ သို့သော်လည်း ပရိတ်ရွတ်ဖတ်နေသော စက်သမ္ဗန်ပေါ်မှသံဃာတော်မှာ ဆက်လက်ရွတ် ဖတ်နေပြီး ရေငုပ်အဖွဲ့က ဘောလုံးအစိမ်းတစ်လုံးထပ်မံချည်နှောင်ကာ ရေပေါ်အမှတ်အသားအဖြစ်သတ် မှတ်လိုက်ပြီး ပဲခူးမြစ်အတွင်းသို့ စတင်ရေတက်နေ၍ မြစ်လယ်တွင် လှိုင်းထန်လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်များကို ပြည်ပသတင်းဌာန တစ်ခုမှ မှတ်တမ်းတင်လျက်ရှိပြီး ၁၀ မိနစ်ခန့်အကြာတွင် မိုးစဲသွား သော်လည်း လေတိုက်၍ လှိုင်းထန်လျက်ရှိပြီး ရေငုပ်အဖွဲ့များ ဆက်လက်၍ မြစ်အောက်သို့ အလှည့်ကျ ရေငုပ်လျက်ရှိသည်။
ထိုနေ.ညနေအထိမူ တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်မှု တစ်ခုမျှ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း မရှိပေ ။ သို.သော်နောက်ပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်မူ
'ရေငုပ်သမားရဲ့အပြောပဲရှိသေးတယ်။ ခေါင်းလောင်းဟုတ်၊ မဟုတ်ကျွန်တော်တို့လည်း သေချာအတည်မပြုနိုင်သေးဘူး။ ဆယ်ပြီးမှပဲ ခေါင်းလောင်း ဟုတ်၊ မဟုတ်သိမယ်'
ဟု ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းဆယ်ယူရေးအထောက်အကူပြုလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီများ အဖွဲ့ ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးနိုင်မင်းအောင်က ပြောဆိုသည်။
ခေါင်းလောင်းကြီးကို မီးပြတိုက်အနီး တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု ခေါင်းလောင်း ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်း
ဆောင်ရွက်နေသည့် ရေငုပ်သမားက ပြောပြသဖြင့် ဆယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစတင်နေခြင်း
ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောဆိုသည်။
'ခေါင်းလောင်းတွေ့လို့ တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ ခေါင်း
လောင်းရှိတယ်လို့ ယူဆတဲ့နေရာမှာ သင်္ဘောပျက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ့လို့ တူးဖော်နေ
တာပါ'ဟု ခေါင်းလောင်းရှာဖွေတူးဖော်ရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူက ပြောပြသည်။
''အခုလက်ရှိနုန်းတွေ အောက် ကသောင်ကို သောင်တူးစက်တွေ နဲ့ စုပ်ထုတ်နေ တယ်။ ရေကတော့ ငုပ်နေသေးတယ်။ ဘယ်နေရာမှာ ဆိုတာကတော့ပြော လို့မရသေးဘူး'' ဟု ခေါင်းလောင်းဆယ်ယူရေးအ ဖွဲ့၏ ဘဏ္ဍာရေးမှူးဦးသန်းစိန် က ပြောသည်။
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းဆယ် ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဩဂုတ်၈ ရက်နေ့မှစတင် ခဲ့ပြီး ဩဂုတ် ၂၆ ရက်တွင် အပြီးသတ်ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ကြောင်း ခေါင်းလောင်း ဆယ် ယူသူ ဦးစံလင်းက ပြောသည်။
“ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းလား၊ ဘာခေါင်းလောင်းလဲတော့ မသိဘူး၊ ခေါင်းလောင်းတစ်လုံး လို့တော့ သိရတယ်” လို့ ခေါင်းလောင်းဆယ်ယူရေး အရန်ကော်မတီမှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၁) ဦးနိုင်မင်းအောင်က ရေငုပ်သမားတွေ ခေါင်းလောင်းတစ်လုံး တွေ့ထားတဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြတာပါ။
ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းရှာဖွေတဲ့ နေရာအနီးမှာ ခေါင်းလောင်းတစ်လုံးကို ရေငုပ်သမားတွေ တွေ့ခဲ့တာပါ။ ယခင်တွေ့ရှိထားတဲ့ သင်္ဘောပျက်နဲ့ ပေ ၂၀ အကွာအဝေးနေရာမှာ ခေါင်းလောင်း တစ်လုံးကို သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့က တွေ့တာလို့ ဦးနိုင်မင်းအောင်က ဆိုပါတယ်။
ခေါင်းလောင်းတွေ့တဲ့ နေရာကို နတ်စင်တစ်ရာ ဆရာတော်ရဲ့ လမ်းညွှန်မှုနဲ့ ရှာဖွေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ ခေါင်းလောင်းကိုရေပေါ်က ဘောတစ်ခုနဲ့ တွဲချည်ပြီး အမှတ်အသား လုပ်ထားတယ်လို့ သူက ရှင်းပြပါတယ်။
အကူပြုသင်္ဘောတစ်စင်းစက်ချွတ်ယွင်းမှုကြောင့် သြဂုတ်၁၉ ရက်၌တူးဖော်မှုရပ်ဆိုင်းထားကြောင်းခေါင်း
လောင်းဆယ်ယူရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးကစံတော်ချိန်သို့ သြဂုတ် ၁၉ ရက်၌ ပြောဆိုသည်။
"သောင်တူးရာမှာအထောက်အကူပြုတဲ့ယာဉ်ကဆီပိုက်ဟိုက်ဒရောလစ်စက်ချွတ်ယွင်းလို့ ဒီနေ့မတူးဘူး။ စက်ကို ပြန်ပြင်နေတယ်။ဘယ်အချိန်ပြီးမလဲတော့ မပြောတတ်ပေမယ့် မနက်ဖြန်လောက်တော့လုပ်ငန်းပြန်စနိုင်မှာပါ'ဟု၎င်းကပြောဆိုသည်။ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း
ဆယ်ယူရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင်သောင်တူးသင်္ဘောတစ်စင်း၊အထောက်အကူပြုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး သြဂုတ် ၁၉ ရက်တွင်စက်ချွတ်ယွင်းမှုကြောင့် တူးဖော်မှု ရပ်နားထားခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ သောင်တူးသင်္ဘောများအား ခေါင်းလောင်းတူးဖော်ရာတွင် အသုံးပြုရန်ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကူညီပံ့ပိုးပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီး တရုတ်မှ မှာယူထားသည့်နောက်ဆုံးပေါ်စက်ကြီးများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း
ဆယ်ယူရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများကို သြဂုတ် ၈ ရက်တွင်စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သြဂုတ် ၁၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီဝန်းကျင်တွင် ဂျပန်သင်္ဘောပျက်အနီး၌ခေါင်းလောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိ သည်ဟု ရေငုပ်သမားများ၏ ပြောဆိုချက်အရ ခေါင်းလောင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို
ထိုခေါင်းလောင်းတူးဖော်နေသော ကောင်းကင်ထက်တွင် ခေါင်းလောင်းပုံ တိမ်တိုက် ပေါ်လာခဲ့သည်ဟု ဂျာနယ်အချို.တွင် ဖော်ပြခဲ့ကြသလို ထိုခေါင်းလောင်းသည် သွန်းလောင်းချိန်က နက္ခတ်အခြေအနေကြောင်. ရေတွင်သာပျော်သည်.အနေအထားရှိပြီး ပြန်လည်ဆယ်ယူ၍ ကုန်းပေါ်ရောက်ပါကလည်း အများသူငါတို.ရေဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်နိုင်သဖြင်. ဆိုင်ရာတို.က ဆယ်ယူမရရှိစေရန် ပြုလုပ်နေသည်ဟုလည်း ဂမ္ဘီရဆန်သော သတင်းများထွက်ပေါ်လာခဲ့သည် ။ ထို.အပြင် ထိုခေါင်းလောင်းသည် အစောင်. ၁၄ယောက် ၇ှိပြီး လူပြည်တွင် ၇ ယောက် ရေအောက်တွင် ၇ယောက် ရှိနေပြီး လူ.ပြည်တွင်ရှိသော ၇ယောက် စု၍တူးဖော်လျှင် ရေအောက်ရှိ ၇ ယောက်ကလည်း ကူညီမည်ဟူသော အယူအဆ တစ်ခုလည်း ရှိနေခဲ့သည် ။ ဆရာတော်များ ပရိတ်ရွတ်စဉ်က ထိုတူးဖော်ရာဝန်းကျင်တွင် နွားနို.များ ရေတွင်လောင်းချ ဒါနပြုခဲ့ကြပြီး နဂါးအကူအညီဖြင်. တူးဖော်မည်ဟုလည်း သတင်းအချို.အရ သိရပါသည် ။
Ref ; Irrawaddy , DVB , Standard Time Daily , MEG , 7Day Daily & Pyi Myanmar Daily
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 5:28 PM No comments:
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်း နှင်. သတင်းများ စုစည်းမှု ( ၅ )
မွန်ဆရာတော်များနှင်. မွန်အမျိုးသားများ မေတ္တာပြု ဆုတောင်း
ရေငုပ်သမား၏ပြောပြချက်အရ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း တူးဖော်မှုလုပ်ငန်းစတင်လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်
ကြောင်း နတ်စင်တစ်ရာဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တပညာတေဇကသြဂုတ် ၁၈ ရက်တွင် စံတော်ချိန်သို့ မိန့်ကြားခဲ့သည်။'ရေငုပ်သမားက ခေါင်းလောင်းတွေ့တယ်ဆိုလို့ ဒီနေ့
စတူးဖော်နေတယ်။ အဖြူအမည်းတော့ မသဲကွဲသေးဘူး' ''ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းရှာ တဲ့နေရာမှာ သူတို့က ခေါင်းလောင်း ကြီးကို သင်္ဘောပျက်ကြီးအောက် မှာလို့မိန့်တယ်။ ဆရာတော့်အမြင်က သင်္ဘောပျက် နဲ့ပေ၂၀ ၊ ၃ဝအကွာမှာ ရှာပါဆိုတော့ ဩဂုတ်၁၆ရက်နေ့က ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း ကို တွေ့ထား ပါပြီ။ သို့သော်လဲ ဓမ္မစေတီခေါင်း လောင်း ရဲ့အသေးအကြီးကို ဆရာ တော်မခွဲနိုင်ပါဘူး။ နောက်လေးငါး ဆယ်ရက်အတွင်း မှာဆိုရင် ထင်ထင် ရှားရှားပေါ်လွင်လာပါလိမ့်မယ်''ဟု နတ်စင်တစ်ရာ ဆရာတော် က မိန့် ကြားသည်။
ခေါင်းလောင်းဆယ်ယူစဉ်ကာလ အတွင်း စိတ်ပူပန်စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုများ၊ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများ ကြုံတွေ့နိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အင်္ဂါသားဦးစံလင်း၏ မွေးနံအရ ယခင်ဆယ်ယူခဲ့ခြင်းများထက် အောင်မြင်မှုပိုမိုရနိုင်ကြောင်း၊ လက်ရှိ ဆယ်ယူမှုမှာ အောင်မြင်မှုရာခိုင်နှုန်း ၆၀ ခန့်ရှိနိုင်ကြောင်း နက္ခတ်သိပ္ပံပညာရှင် ဦးဇေယျာကိုက မီဒီယာသို့ ထုတ်ဖော် ပြောကြားထားခဲ့သည် ။
မြစ်သုံးခုဆုံရာနေရာတွင် ပြုလုပ်နေသည့် ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းဆယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းသည် စတင်ခဲ့သည့် နေ့ (သြဂုတ် ၁၀) ရက်သည် မြန်မာအယူအဆအရ မကောင်းသည့်နေ့ဖြစ်သည့်အတွက် ဆယ်ယူရာတွင် အခက်အခဲများဖြစ်တတ်သည်ဟု ဗေဒင်ဆရာ စံဇာဏီဘိုက သြဂုတ် ၁၄ ရက်တွင် ပြောဆိုသည်။ “အခက်အခဲတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ တစ်ပိုင်းတစ်စ ဖြစ်တတ်တယ်။ အပြည့်အ၀မရသလို ဖြစ်တတ်တယ် ။ ဆယ်ယူပြီး ကုန်းပေါ်တက်တဲ့ အချိန်ကို ကြည့်ပြီးရင်တော့ ပြန်လည် မွေးဖွားခြင်းရဲ့နောက် ကွယ် မှာ ဘာတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာကို ဟောပြောနိုင်လိမ့်မယ်” ဟု ထပ်မံပြောဆိုသည်။
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းရှာဖွေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းကို သြဂုတ်၁၈ရက်မွန်းလွဲပိုင်း၌စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ယင်းသို့တူးဖော်မှုမှာ ခေါင်းလောင်းတွေ့၍ တူးဖော်နေခြင်းမဟုတ်ဘဲ ရှိနိုင်သည်ဟု ယူဆရသည့်နေရာတွင် တူးဖော်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဂမ္ဘီရ၊
ဗေဒင်ပညာရှင် ဆရာဇင်ယော်နီက ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဘုရားပစ္စည်း ဆိုသည် တကယ် တမ်းကြည့်မည်ဆိုလျှင် ငရဲမီးဖြစ် ပြီး အတ္တဝိသမလောဘ စိတ်များဖြင့် ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း ကြီး ကို ပေါ် အောင်ဖော်မည် ဆိုပါက မည်သည့် အခါမှရရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း ရဟန်း၊ ရှင်လူပြည် သူများအနေဖြင့်လည်း ယခု တစ်သက်ဖူး မြော်ခွင့်ရရှိမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ မွန်အဖွဲ့နှင့်ဦးစံလင်း တို့အဖွဲ့သည် ကိုယ်ကျိုးအတွက် မဟုတ်ဘဲ ရဟန်းရှင် လူပြည်သူအများ ဖူးမြော်နိုင်ရန် ရွှေတိဂုံစေတီတော်သို့ လှူဒါန်းမည့်အဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်း ဆရာတော်က ဆက်လက်မိန့်သည်။
မွန်ဓမ္မစေတီမင်းခေါင်းလောင်း တော်ကြီး အမြန်ဆုံးအောင်မြင်စွာ ဆယ်ယူနိုင်ရန်အတွက် ဩဂုတ် ၁၇ ရက်တွင် နတ်စင်တစ်ရာ ဆရာတော် ကြီးနှင့် သံယာတော်များ၊ မယ်သီလရှင် ဆရာလေးများနှင့် ဓမ္မစေတီမွန် ခေါင်းလောင်းတော်ကြီး ဆယ်ယူ ရေး အထောက်အကူပြု ဆပ်ကော် မတီ အဖွဲ့တို့မှ မြစ်အတွင်းဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်း ရှာဖွေဆယ် ယူနေရာ ပတ်ပတ်လည်လှည့်၍ ပရိတ်တရား တော်များ ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ခဲ့ပြီး ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ခဲ့ကြသည်။
မြစ်အတွင်းတွင်နတ်စင်တစ်ရာ ဆရာတော်မှ သမ္ဗန်တစ်စင်း၊ နေ့ နာမ်အလိုက် သံယာတော်သုံးပါးစီမှ သမ္ဗန်တစ်စင်းစီဖြင့် သမ္ဗန်ရှစ်စင်း၊ မယ်သီလရှင် ဆရာလေးလေး ပါးမှ သမ္ဗန်တစ်စင်းစီဖြင့် သမ္ဗန်နှစ်စင်း၊ ဓမ္မစေတီ မွန်ခေါင်းလောင်းတော် ကြီး ဆယ်ယူရေးအထောက်အကူပြု ဆပ် ကော်မတီ အဖွဲ့တို့မှလည်း သမ္ဗန်များ ဖြင့် မြစ်အတွင်း ပရိတ်တရားတော် များ ရွတ်ဖတ် သရဇ္ဈာယ်ခဲ့ပြီး ဆု တောင်းမေတ္တာပို့ခဲ့ကြကြောင်း သိရ သည်။
သမ္ဗန်များဖြင့် ဆုတောင်း မေတ္တာ ပို့ခဲ့ကြသည့်အချိန်တွင် ရာသီ ဥတု သည် ကောင်း မွန်လျက်ရှိပြီး မိုးရွာသွန်းမှုလည်း မရှိခဲ့ကြောင်းသိ ရသည်။
ထိုမတိုင်ခင်ကလည်း ဇင်ယော်နီ နှင်.အဖွဲ.မှ သွားရောက်အားပေးခဲ့ကြသလို ပထမဆုံးအနေဖြင်. မွန်ဆရာတော်များကလည်း ရွှေတိဂုံစေတီတော်တွင် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခဲ့ကြသေးသည် ။
လာရောက်ကြည်.ရှုကြသူများ၏ အမြင်နှင်. ဆန္ဒများ
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း ဆယ် ယူခြင်းအား စောင့်ကြည့်သူ များပြားနေပြီး ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း ဆယ်ယူရေးကို လူ တိုင်း စိတ်ဝင်စားလာကြသဖြင့် ဆယ်ယူ ရေးအခြေအနေကို သိရှိရန် ဆယ်ယူရေး လုပ်ငန်းခွင်ရှိရာသို့ နေ့စဉ်သွားရောက်ကြည့် ရှုနေသူများလည်း ရှိနေပြီး ခေါင်းလောင်းဆယ်ယူရေးနှင့် အနီးစပ် ဆုံးနေရာဖြစ်သည့် ရန်ကုန်မြို့ သာကေတ မြို့နယ် ရှုခင်းသာ ပန်းခြံအနီး အေးရှားပွိုင့် ဘိုးလင်းစင်တာဝင်းအတွင်းသို့ သွားရောက် သူများ တစ်နေ့တခြား များပြားနေသည်။ို စိတ်ဝင်စားသူများထဲတွင် သံဃာ တော်များလည်း ပါဝင်နေပြီး ဆယ်ယူရေး လုပ်ငန်းများကို လာရောက်ကြည့်ရှုကြသည်။
လမ်း မတော်သရက်တောအင်းဝကျောင်း မှ ဆရာတော်တစ်ပါးက “ယနေ့ မြင်ရတာအားရတယ်။ သူတို့ဆယ်နေတာ အဆင်ပြေကြတယ်။ ဦးပဉ္စင်းလည်း ဒီလာကတည်းက မေတ္တသုတ်၊ သမ္ဗုဒ္ဓေရွတ်လာခဲ့တာ၊ တို့မြန်မာတွေ ရကိုရရမယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ ဒါဟာ မြန်မာတင် မဟုတ်ဘူး။ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ပဲ။ နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ ကျော်မှ ဆယ်ယူနိုင် ခဲ့ရင် မြန်မာကို ကမ္ဘာကအံ့ဩမှာ သေချာတယ်။ ရင်ထဲမှာလည်း ပီတိဖြစ်ရတယ်။ အတွင်းရေးမှူး(၁) ဆယ်တုန်းကလည်း ရှုခင်းသာကလှမ်း ကြည့်ခဲ့ရတယ်။ အခုလို အနီးကပ်မြင် ခွင့်မရခဲ့ဘူး။ အခုလို မြင်တွေ့ရတာ အားရပါတယ်” ဟု ပျော်ရွှင်စွာ မိန့်ကြားသည်။
''စိတ်ဝင်စားလို့ လာကြည့်တာ ပါ။ ဘယ်လိုနည်း ဘယ်လိုဟန်နဲ့ ဆယ်မှာ လဲဆိုတာကို ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီးကို အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံက ဆယ်ခဲ့ဖူးတယ်။ မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ ဒီအဖွဲ့က တော်တော် လေး ကျိန်းသေပုံစံနဲ့ပြောလို့ လာကြည့်တာ ပါ။ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းက သမိုင်းအရ တကယ်ရှိခဲ့တာ။ အခု ဆယ်လို့ ရ၊ မရတော့ မသိဘူး။ ခေါင်းလောင်းကြီး ဆယ်ပြီးရင် သာသနာတော်အတွက်တော့ ထူးခြားမှု မရှိ ပေမယ့် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် အကျိုး ရှိပါတယ်။ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီးကို ရွှေတိဂုံပေါ် ပြန်ထားနိုင်ရင် မြန်မာ့သမိုင်း ပိုခိုင်မာသွားမယ်'' ဟု ငါးဆူတောင် ဘုန်း တော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းတိုက်မှ ဆရာတော်တစ်ပါးက မိန့်ကြားသည်။
''အန္တရာယ်တော့ များတယ်။ ရေ လယ်ကို သွားမကြည့်သင့်ဘူး။ အန္တရာယ်ဆို တာ မြင်ရတဲ့ လေဒဏ်၊ လှိုင်းဒဏ်တွေ ရှိ သလို မမြင်ရတဲ့ အန္တရာယ်တွေလဲရှိနိုင်တယ်။ ပေးဆပ်မှုတွေ ရှိနိုင်တယ်။ လုပ်ငန်းအောင် မြင်ခါနီးအချိန်ဆိုရင် အဖျက်အမှောင့်တွေ ရှိနိုင်တယ်။ ရေလယ်ကို သွားခွင့်မပြုသင့် ဘူး'' ဟု ခေါင်းလောင်းဆယ်ယူရေးကို လေ့ လာကြည့်ရှုနေသော ဆရာတော်တစ်ပါးက မိန့်ကြားသည်။
''ရေလယ်ကို သွားကြည့်တာ ကြောက်ဖို့ အရမ်းကောင်းတယ်။ လှိုင်းလူး ပြီး မျက်နှာကို ရေတွေစင်တယ်။ လေတွေ တအားတိုက်တယ်။ မိုးရွာတဲ့အချိန်ဆို ပို ဆိုးမယ်။ အန္တရာယ်များတဲ့အတွက် မသွား သင့်ပါဘူး။ သမ္ဗန်တစ်ခါစီးရင် တစ်ယောက် ကို ကျပ် ၁ဝဝဝ ကျပါတယ်''ဟု ရေလယ် အထိသွားခဲ့သူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြော သည်။
''ကျွန်တော်က ဒေါပုံမြို့နယ်က ပါ။ ဆယ်ယူတဲ့အချိန်ကစပြီး ကြည့်တယ်။ ၉ ရက်ကစပြီး မနက်တစ်ခေါက် ညနေတစ် ခေါက် လာကြည့်ပါတယ်။ ခေါင်းလောင်း ကြီးကိုတွေ့ရင်တော့ အတိုင်းထက် အလွန် ပေါ့၊ ဝမ်းသာတာပေါ့။ ကျွန်တော့်အထင် ပေါ်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်း၅ဝပဲ ၊ ''တစ်နေ့ကို လာလိုက်သွားလိုက် နဲ့ လူတွေ ထောင်ချီရှိတယ်။ အခုခြောက် ရက်မြောက်ရှိပြီ။ ရှစ်ရက်ပဲကျန်တော့တယ်။ သူတို့က သုံးထပ်သင်္ဘောပေါ်မှာ နေကြ တယ်။ ရေထဲကို သွားလို့တော့ရတယ်။ မှတ် တိုင်အမည်းရောင်ကို ကျော်လို့မရဘူး'' ဟု ဓမ္မစေတီခေါင်း လောင်း ဆယ်ယူရေးကို စောင့်ကြည့်နေသည့် ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့လေကြောင်း မှ စက်မှုကျွမ်းကျင်(ငြိမ်း)ဦးမြရွှေက ပြော သည်။
ခေါင်းလောင်းကို တွေ.ပြီဟု သတင်းထွက်လာသည်.နောက်ပိုင်း စိတ်ဝင်စား သည့် လူအချို့က ''ခေါင်းလောင်းကြီးတွေ့ တယ်ဆိုတာ လူတွေ လျှောက်ပြောနေတာ ပါ။ ရေထဲမှာတွေ့တဲ့ ခေါင်းလောင်းက ဓမ္မ စေတီခေါင်းလောင်းဆိုတာ ဘယ်သူက ဘယ် လို အတည်ပြုပေးမှာလဲ''ဟု ဆိုသည်။
Ref ; Standard Time Daily , Hot News , MEG , Irrawaddy &7Day Daily
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 2:49 PM No comments:
Maubin GTI GTC TU (15)
ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ ဆိုင်ရာ များ (28)
ချက်ကြမယ်ဟေ. ကောင်းကောင်း (10)
ထူးချွန် ထင်ရှား ဇာတိဖွား နှင်. ထက်မြက် အောင်မြင် အနွယ်ဝင် များ (37)
နာမည်မကျော်သော်လည်း လူသိများခဲ့ကြသည် (4)
မြို.လေးနှင်. ပတ်သက်ဖွဲ.သီ စာပန်းချီ (55)
မြို.လေးနှင်. သူ၏ မိတ်ဆွေများ (30)
သမိုင်းဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ များ (24)
ဓမ္မစေတီ ခေါင်လောင်းဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းနှင်. သတင်းများ...
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်း နှင်. သတင်းမျ...
၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင်နှစ်အတွက် မြို.လေးဆီက ပညာဒါန သင်တန်း
ဒုတိယမြောက် မိသားစု တွေ.ဆုံပွဲ ၊ ရင်ဖွင်.ပွဲ ၊ အသိ...
Ooredoo ဖလားနဲ. လက်တစ်ကမ်း အလို ရောက် Ayeyawady Un...
၀ါးခယ်မ သခင်သိန်းဖေ ပညာသင်ဆုရ မအူပင်နည်းပညာတက္ကသိုလ...
မဲဆန်ဒရှငျစာရငျး အမှားပွငျဆငျခှငျ့ လေးရကျသာ ကနျြရှိ - မှနျပွညျနယျ ပေါငျမွို့မှာ ဆန်ဒမဲပေးခှငျ့ရှိသူ အမညျစာရငျးကို ကွညျ့ရှုနသေူတခြို့။ (ဇူလိုငျ ၂၇၊ ၂၀၂၀။ ဓာတျပုံ - MOI)နိုဝငျဘာလ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ မဲပေးခှငျ့ရှိသ...
မွငျးကကုနျးရဲစခနျး၌ အခြုပျသား ၁ ဦး သဆေုံးမှု ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားကို စဈဆေးနေ - အခြုပျသား သဆေုံးမှုနှငျ့ပတျသကျ၍ မွငျးကကုနျးနယျမွေ စခနျးမှူး ရဲအုပျ ဇျောမြိုးထကျအပါအဝငျ တာ ဝနျရှိသူမြားအား ဖြာပုံခရိုငျ ရဲတပျဖှဲ့က ခုံရုံးဖှဲ့ စဈဆေးသှားမ...
ညပိုင်း ၉း၀၀-၁၀း၀၀ - [Zawgyi/Unicode] နောက်ဆုံးရ နိုင်ငံတကာသတင်း၊ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းထုတ်ပြန်မှု အမှားမှားအယွင်းယွင်းတွေကို ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ လေးရက်ပဲ ကျန်ရှိ...
ကအေိုငျအိုနဲ့ FPNCC အဖှဲ့တှေ ၂၁ ရာစုပငျလုံ တကျမတကျ မသခြောသေး - မွောကျပိုငျးမဟာမိတျ ၄ ဖှဲ့နဲ့ ၀၊ မိုငျးလား၊ ရှမျးပွညျတပျမတျော မွောကျပိုငျးတို့ ပါဝငျတဲ့ FPNCC အဖှဲ့တှေ တကျမတကျ မသခြောသေးဘူးလို့ ငွိမျးခမျြးရေးအကြိုးဆောငျ တ...
နရေပျပွနျရနျ မလေးသံရုံးအီးမေးလျကို စာရငျးပေးထားသူ မွနျမာအလုပျသမား ၁ သောငျး ခနျ့ရှိ - နရေပျပွနျလိုကွောငျး သံရုံးအီးမေးလျကနေ စာရငျးပေးထားတဲ့ မလေးရှားနိုငျငံရောကျ တရားမဝငျမွနျမာအလုပျသမား ဦးရေ ၁ သောငျးဝနျးကငျြလောကျ ရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။[...] T...
တောနော်ရေတံခွန်တွင် ပျောက်ဆုံးနေသော တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် ကျောင်းသားရုပ်အလောင်း မတွေ့ရှိ သေး - သြဂုတ် ၁၀ ရက်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်။ နေနော် ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီ-ကော့ကရိတ် အာရှလမ်း ကော့ကရိတ်မြို့မှ ၇ မိုင်ခန့်အကွာရှိ တောနော် သဘာဝရေတံ ခွန်တွင် ယမန်နေ့ (ဩဂုတ်လ ၉ ...
TUIPHUM PAWLPITE’ TANGTHU A TOMIN - Agelh- Rev. Kam Khaw Thang Zogam huam Chin State sung pan Avmasavbel Biakbuuk Khuasak Khua 1906. Zomi leh Biaknaakici laibu sungah hel ding in Tui...
ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်း ကျော်နိုင်မလား❓ (ကိုဗဈဒုတိယလှိုငျး ကြျောနိုငျမလား❓) - KP ဟူးရားပညာ အလိုအရ သတင်းနဲ့ပတ်သက်ရင် ၃-တန့် CSL ကိုကြည့်ရမယ်။ ၄င်းသည် ၃-င်္ဂါဖြစ်လျှင် ခြိမ်းခြောက်သောသတင်းဖြစ်သည်။ ၅-တေးဖြစ်လျှင် သတင်းမှန်သည်။ ၀-နေဖြစ်လျှ...
သင့်အတွက် ထိုင်းရိုးရာ နှစ်ကူးကံကြမ္မာ - မြန်မာတွေလိုပါပဲ။ ထိုင်း (ယိုးဒယား) လူမျိုးတွေဟာလည်း ဗေဒင်၊ လက္ခဏာ အစရှိသည်တို့ကို အင်မတန်မှ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းမှာ ရှိတဲ့ ဘုရားကျေ...
နာမည်ကျော် လက်နက်ငယ်များ အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း ( ၂ )
ဆက်စပ်ကြည့်ရှုရန် နာမည်ကျော် လက်နက်ငယ်များ အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း နှင်. မြို.လေးရဲ. အခြေအနေ
Photo by myammarht ပြီးခဲ့သည်. စနေနေ. (၂၀၁၃ ဇွန်လ ၈ ရက်) နေ.က ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်ကဖြေဆိုခဲ့သော တက္ကသိုလ် ၀င်တန်းအောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ခဲ...
( တစ်ချိန်က နာမည်ကျော် တစ်ဦးမို. ရှာဖွေရရှိသော အချက်အလက်များအား ဖော်ပြအပ်ပါသည် ။ ကြိုတင်မေတ္တာရပ်ခံလိုသည်မှာ နှလုံးအားနည်းသူများ ၊ ရွံရ...
နာမည်ကျော် လက်နက်ငယ်များ အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း
BA 63 - G3
တပ်မတော် ဘာလဲ ဘယ်လဲ ( ၅ ) - ရဲမိုး
မာနယ်ပလောဒေသမှ လက်နက်ကိုင်တစ်ဖွဲ. မျက်မှောက်ခေတ် နိူင်ငံရေးသမားအတော်များများဟာ ၈၈ အရေးအခင်းကြီးကို ဒီမိုကရေစီ အတွက် ICON တစ...
သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ မော.စ်(ခေါ်) မောင်တင်ဝင်းကို ဧရာဝတီတိုင်း လေးမျက်နှာမြို.နယ် ရေသိုးချောင် ကျေးရွာတွင် အဘ ဦးထွန်းအေး အမိ ဒေါ်အချုံ တို.မှ...
၀ါးခယ်မမြို. အထက ၁ ၏ ရုပ်စုံ မဟာဘုံကထိန် အကြိမ် ၅၀မြောက် ရွှေ၇တု ကထိန်ကို ယခုနှစ်တွင် အခြားနှစ်များနှင်. မတူပဲ ၂၀၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်နေ.က ထ...
အားတကျစမေယျ့ စကားစုမြား ၄ - ကိုယျ့လုပျရပျကို မှနျရငျ မှနျတယျ၊ မှားရငျမှားတယျလို့ ပွောပွပေးနိုငျတဲ့သူနဲ့သာ ပေါငျးပါ။ မှနျနတောကိုမှားတယျပွောတာတို့ ၊ မှားနတောကို မှနျတယျပွောတတျတဲ့သူတှနေဲ...
တာခြီလိတျမွို့ မယျခေါငျရပျကှကျမှ စ၍ မွို့ပွငျကြေးရှာအုပျစုမြားအထိ ဩဂုတျလ(၁၃)ရကျနေ့ နတေ့ဈပိုငျး လြှပျစဈမီး ဖွတျတောကျမညျ
The Whole Burma First ဆုရှငျ မသေကျထှနျး
Man Utd dealt Sancho blow as Dortmund director Zorc claims decision to keep winger is 'final' - The German side have extended the winger's contract and claim he is not leaving the club